Ndeapi Mabasa Anodiwa muDhijitari Yekushambadzira Dhijitari? | Martech Zone
Mugovera, Nyamavhuvhu 31, 2019 Mugovera, Nyamavhuvhu 31, 2019 Douglas Karr
Kune vamwe vatengi vangu, ini ndinobata zvese tarenda rinodiwa kune avo ekushambadzira edhijitari. Kune vamwe, vane vashandi vashoma uye isu tinowedzera hunyanzvi hunodiwa. Kune vamwe, vane timu inoshamisa yakasimba mukati uye vari kungoda hutungamiriri hwakazara uye maonero ekunze kuti avabatsire kuti vagare vachigadzira zvinhu zvitsva uye vazive maburi.
Pandakatanga kambani yangu, vatungamiriri vazhinji muindastiri vakandiudza kuti ndiise hunyanzvi uye nditeedzere rimwe basa; zvisinei, gwanza randakaona mumakambani mazhinji nderekuti havawanzo kuve nechikwata chakadzikama uye zvakaburitsa mikana muzvirongwa zvavo zvakaenda zvisingaonekwe. Izvo hazvireve kuti ivo vari kukundikana nechero nzira, zvaingoreva kuti ivo vaive vasinga svike kuzere kugona kwavo nezvinhu zvavaive nazvo.
Mune mawonero angu, ndinotenda bhizinesi rega rega rinofanirwa kuve neanowirirana naye wekunze mukushambadzira kwayo kwedigital. Ndichiri, hongu, ndakarerekera… pane zvikonzero zvinoverengeka:
Chirongwa Chekupa Risense - Ini ndinowana mabhizinesi ekushandisa maturusi andiri kukwanisa kudzikisa mutengo wevatengi vese. Izvi zvinogona kunyatso chengetedza kambani mari yakati wandei.
Focus - Sechinhu chekunze, ndine mukana wakasarudzika wekusafanira kuzvinetsa nekushanda kwekambani, misangano, zvematongerwo enyika, kana kunyangwe (kazhinji yenguva) zvirambidzo zvebhajeti. Ini ndinowanzo shandirwa kugadzirisa dambudziko ndobva ndatevera izvo ndisingaregi - nekambani ichibhadhara iyo kukosha kwandinopa kwete muhoro uyo unogona kana ungasaite.
Mutengesi - Inenge kambani yega yega ine mutero, saka ini ndinokwanisa kuvhara maburi muhunyanzvi kana vatengi vangu vaine vashandi vari kutendeuka. Uye rinenge sangano rega rega rine mutero!
Niche Ruzivo - Makambani mazhinji haakwanise kuhaya zviwanikwa zvebasa rese rinodiwa, asi ini ndakagadzira iyo network yemateeteti pamusoro pemakore nevatungamiriri vanoratidzwa. Izvi zvinoreva kuti ndinogona kuunza anodiwa mabasa sekudikanwa, ndichigadzirisa bhajeti uye nekuunza shasha dzechokwadi dzinozowedzera mikana yekubudirira.
Ruzivo Rwakawanda - Nekushanda pamabhizimusi nekugara pamusoro pemaindasitiri maitiro, ndinounza mhinduro itsva kune vatengi vangu. Kana isu tikayedza zano kana chikuva pane imwe kambani uye zvinoshanda nemazvo, ndinounza kune vese vatengi vangu uye ndozviisa neakawanda mashoma matambudziko kupfuura kana mutengi akazviitira ega.
Izvi infographic kubva Spiralytics, Maitiro Ekugadzirisa Yako Dhijitari Kushambadzira Chikwata, inotaura nezve gumi nematatu mabasa anodiwa kuti timu yemazuva ano yekushambadzira yedigital ibudirire.
Dhijitari Kushambadzira Dhipatimendi Mabasa:
Digital Marketing Manager or Project Manager - kutarisa mapurojekiti uye kuona kuti timu iri kushanda nemazvo.
Creative Director or Graphic Designer - kuchengetedza kutaridzika kunoonekwa kwekutaurirana kwechiratidzo kuburikidza nemadhijitari madhijitari.
Developers - kusangana uye zvinhu zvinofambidzana ndizvo zvinofanirwa kune ese masangano mazuva ano, saka kuve nechikwata chakagadzirirwa kuvaka yakasimba kumashure-kumagumo ine rakakura mushandisi ruzivo kumberi-kumagumo kwakakosha.
Dhijitari Kushambadzira Muongorori - zvakakosha kuti timu yega yega yekutengesa yedhijitari ine nzira dzakarongwa dzekuyera zvazvinoita pamwe nekuzivisa zvine mutsindo izvo zvinobatsira hutungamiriri nechikwata kuziva mhedzisiro.
Dhijitari Kushambadzira Strategist - chega chega chirongwa chinofanirwa kunge chiri kubatsira kutyaira makiyi ekuita zviratidzo uye zvinangwa zvacho zvesangano. Imwe nyanzvi inobatanidza zvidimbu izvi pamwe chete uye inoona kuti nzira dzese, masvikiro, uye midhiya zvakakwenenzverwa zvizere.
SEO maneja kana Nyanzvi - injini dzekutsvaga dzinoramba dzichitungamira nzira dzese nemushandisi chinangwa kutsvagisa sarudzo yekutenga. Organic mapuratifomu ekutsvaga anopa huwandu hweruzivo kuti madhijitari ekushambadzira zvikwata anogona kushandisa pamwe neiyo yakakwana inbound chiteshi yekutyaira inotungamira. Kuva nemumwe munhu anotyaira aya anodhura-mashandiro inofanirwa kune ese masangano.
Tsvaga Yekushambadzira Nyanzvi - nepo organic yekutsvaga ichida kukurumidza uye chiremera chekutungamira mune yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji, kushambadzira kunogona kuzadza mukaha wekutyaira anotungamira. Izvo hazvisi pasina mari uye hunyanzvi, zvakadaro. Kutenga kushambadza kunogona kuve kukanganisa kunotyisa uye kunodhura kana iwe usina hunyanzvi.
Ratidza Kushambadzira Nyanzvi - kune mamwe masayiti ane vateereri vauri kuedza kusvika, saka kushambadza pane iwo masosi kutyaira kuziva, kuita, uye kutendeuka izano rakasimba. Nekudaro, iyo nhamba yemapuratifomu ekushambadzira, kunongedza kugona, mhando dzezvishambadziro, uye kuyedza akasiyana hazvisi zvipfupi nesainzi Kuwana mumwe munhu kuti akure kukanganisa kwekuratidzira kwako kwekuratidzira kunofanirwa.
Social Media Manager kana Nyanzvi - vezvenhau vezvemagariro vanoramba vari sosi yekudyidzana nevaunotenga vatengi pamwe nechaiko chiteshi chekusimudzira chako pachako kana chehunyanzvi zita rechiratidzo. Kuve nemumwe munhu anotsvagisisa, kuongorora, uye kukura nharaunda yako kuburikidza nekukurudzira, rutsigiro, neruzivo izano rakasimba kune chero chazvino chiratidzo.
Nhoroondo yevashandi or Mushandisi Wemanyorero Mugadziri -Mugadziri wako wepamberi asati anyora chiitiko, chinoda kugadziridzwa uye kuyedzwa zvizere kudzora kushushikana uye kugadzirisa kugutsikana kwevatengi. Kuva nemunhu anonzwisisa yemunhu komputa interface dhizaini imari inodiwa pakuvandudza zviitiko izvi.
Munyori - Mapepa enhau, shandisa makesi, zvinyorwa, zvinyorwa zveblog uye kunyange zvemagariro enhau zvinoda vanyori vane tarenda vanogona kuratidza toni, hunhu, neruzivo rwauri kuyedza kuparadzira. Kuva nemunyori pane vashandi kunogona kuva kunakidzwa kwevakawanda… asi zvakakosha kana iwe uchida kuti kudyara mune zvako zvemukati kuve nekukanganisa.
Email Marketer - Kubva pakuburitswa, kuenda kumutsara wenyaya, kune zvemukati dhizaini ... email inzira yakasarudzika yekutaurirana inoda tarenda nehunyanzvi kuti uwane mhinduro. Maboxbox edu akazara mazuva ano, saka kuwana vanyoreri kuti vavhure nekudzvanya idambudziko.
Zvemukati Kushambadzira Nyanzvi kana Strategist - Ndeipi misoro iri kutsvaga kwako uye vatengi vari kutsvaga? Ko raibhurari yezvinyorwa zvauri kuburitsa zvinoita sei? Wemukati wekushambadzira Strategist anobatsira kuisa pamberi uye kuona misoro iri kuzotenderera… pamwe nekuona kuti urikugara musoro wemakwikwi ako.
Tags: digital mushambadzidigital advertisingmadhijitari ekushambadzira nzvimbodigital kushambadzira mabasadijitari rekushambadzira timumadhijitari ekushambadzira mazitagraphic gadziratsvaga wekushambadzira nyanzviseo manejasocial media nyanzvi